siifsiin – Page 29 – Oromo Literature and Culture
Mararoo Gaa’eelaa ykn Warroommii
Afoolli Oromoo hambaa abaabileefi akaakileerraa jecha afaaniitiin dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufe; ammas darbaa kan jiru; fuula duras darbaa kan jiraatuudha. Kana jechuun Ummanni Oromoo durii kaasee yaada, ilaalcha, ergaa, falaasama, fedhiifi abdiisaa, gaddaafi gammachuu qabu afoolaan dabarsaa ture jechuudha. Kanaafuu, Afoolli Oromoo hambaa ganamaafi calaqqee aadaa Oromooti. Gabaabumatti, afoolli Oromoo dilbii bara dheeraati; cirracha bishaaniitis. Waraabamee, lakkaawamee, akkasumas … Continue reading Mararoo Gaa’eelaa ykn Warroommii
Waa Sadii Afoola Oromoo
Akkuma maqaarraa hubatamutti waa sadiin damee afoolaa ta’ee wantoota sadiin, jechoota filatamoo ta’aniin gorsa, barumsaafi ergaa ciccimoo kan dabarsudha. Nama karaa gaariirra jiru ni jajjabeessa; kan daandii irraa maqe ni qeeqa. Walumaagalatti jiruufi jireenya Oromoo keessatti dhugaa jiru mara ifa godhee namatti agarsiisa. Waa sadii afoola Oromoo armaan gadiis kanuma dhugoomsa. Waa sadii ifa, waa … Continue reading Waa Sadii Afoola Oromoo
Bar-tokkoo Adureewwn obbolaa wal jaalataan lamtu turan. Inni tokko gurracha.Inni biroon immoo adii ture. Guyyaa tokko osoo waliin deemanii; adureen adiin fuuldura isaaniitti waan marame tokko arge. Yeroo kana adureen gurrachi utuu waa hin dubbatin ariitiin figuudhan daabboo sana lafaa kaasee yeroo ilaalu waanti marame sun daabboo mi’aawwaa bifa keekkiin tolchame ta’uusaa hubatee ; “Wawu! … Continue reading Walii galan Alaa galan